Lacag badan oo Bangiga Dhexe laga bixiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Lacag badan oo Bangiga Dhexe laga bixiyay
Ciidamo iyo Saraakiil sare oo Xafiiska Madaxweynaha katirsan ayaa xalay tagey Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, iyagoo halkaasi kasoo qaadey lacag badan oo Kaash ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxay ilo-wareedyo ku sugan Villa Somalia u sheegeen Keydmedia Online in xalay lacag badan oo Kaash ah laga bixiyay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya xili mudo xileedka Farmaajo ku egtahay 8-da Febuary.
Macluumaadka ayaa intaasi ku daraya in Lacagtan la geeyay xafiiska Fahad Yaasiin, waxaana isla xalay qaarkeed loo qeybiyay Xildhibaanno badan oo loo diyaariyay inay u codeeyaan Mooshinka mudo-kordhinta Farmaajo.
Lama oga illaa hadda cadadka lacagta, balse waxaa lagu qiyaasayayaa illaa dhowr milyan oo dollar. Fahad Yaasiin ayaa ah madaxa ololaha doorashadda Farmaajo, wuxuuna diyaariyay liiska Xildhibaanada dooran doono.
Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Mursal oo si indha la'aan u taageera Farmaajo ayaa maanta rabey inuu si boobsiis ah ku meel-mariyay Mudo-kordhinta Madaxweynaha balse lagu fahmay, iyadoo Xildhibaanada qaar hoolka ku yeeriyeen firinbi.
Qorshaha ayaa ahaa in Saxaafadda dibadda loo saaro kadibna kulanka laga dhigo mid qarsoodi ah, oo meel mugdi ah loogu codeeyo in Farmaajo hal sano oo dheeraad ah loogu daro, taasoo Xildhibaanada mucaaradka ay diideen.
Xiliyadda kala-guurka waxaa dhacda in Madaxweynaha lacagta qaranka u adeegsado dib u doorashadiisa, taasoo u shaqeyn waysay Madaxdii hore oo qofna mar labaad soo noqon, waana arinta caan ka ah dalka in Madaxweynaha labo jeer la dooran "One Chance".
0 Comments Topics: fahad yaasiin farmaajo soomaaliya